Injineero Turki ah oo Gantaal Haboow ah ku dhaawacmay. – idalenews.com
Sida aan ay inoo Xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah, ayaa waxay sheegayaan in ay ay dhaawac meen laba ka mid ah Injineerada Turkiga, ee ku sugan Magaalada Caasimada ah ee Muqdisho.
Wararka waxay sheegayaan in labadaan nin ay ku dhaawacmayn saqdii dhexe ee xalay, gantaal lagu dhuftay Dhismaha Safaarada cusub ee Turkigu uu ka dhisanaayo Degmada C/casiis ee Waqooyiga Magaalada Muqdisho.
Labada nin ee dhaawacantay, ayaa waxay qayb ka ahaayeen Injineerada Turkiga ee Dhismaha ka wada Safaarada cusub ee Turkiga, ee lagu wado in laga hirgeliyo agagaaraha Dekadii hore ee Duqda.
Gantaalka lagu dhuftay Dhismaha Safaarada, ayaan la garanayn goobta laga soo tuuray, laakiin Ciidan Booliska ka tirsan oo xalay goobtaasi gaaray, ayaa waxay weerarkaasi u soo qabteen tiro ka tirsan Ciidamada Militariga ee Dowladda, oo aaggaasi ka ag-dhawaa tuhuna uu galay, inkastoo dib loo sii daayay.
Injineerada Turkiga ee weerarkaan ku dhaawacantay, ayaa waxaa magacyadoodu lagu kala sheegay Mukhtaar iyo Najiib, iyadoo dhaawacyadoodu lagu sheegay mid dhexe, iyadoo xilligaan lagu daweynayo Muqdisho.
Waxaa soo baxaya warar sheegaaya in ay suurta gal tahay in dhaawacyada labadan nin loo qaado Magaalada Istanbul ee Xaruntii hore ee Wadanka Turkiga.
Saraakiil ka tirsan Booliska ka hawlgala Waqooyiga Magaalada Muqdisho, ayaa waxaa laga soo xigtay khasaaraha labada nin ee Turkiga ka soo gaaray gantaalkii lala helay Dhismaha Safaarada cusub ee Turkiga.